भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच फेरि भि-डन्त ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच फेरि भि-डन्त !
काठमाडौँ – भारतीय र चिनियाँ सेना लद्दाख क्षेत्रमा पुनः आमने-सामने भएका छन्। लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच पुनः झ-डप भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
चिनियाँ सैनिकले भारतीय पक्षलाई उक्साउने किसिमका गतिविधि गरेपछि दुई देशका सेना आमने-सामने भएको भारतीय संचार माध्यमहरुको दावी छ। सीमाबारे भारत र चीनले तीन दशकमा पटक-पटक वार्ता गरे पनि कुनै समाधान फेला पारेका छैनन्। त्यस्तै भारतले आफ्नो ३८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको चीनमाथि आरोप लगाएको छ ।
उक्त आमने-सामने बारे भारतीय सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनियाँ पक्षले भारतीय सेनालाई उक्साउने गतिविधि गरेको जनाएको छ। साथै उसले आफूहरु सम्वादका माध्यमबाट शान्ति स्थापना गर्ने पक्षमा रहेको र आफ्नो भूमिको अखण्डताका लागि प्रतिवद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
भारतीय पक्षले चीन पक्षबाट भारतीय सेनालाई उक्साउने कार्य भएको जनाएपनि उक्त आरोपलाई चिनियाँ पक्षले नकारेको छ। चीनले भने आफ्ना सैनिकले एलएसी पार नगरेको दावी गरेको छ। वास्तविक सीमा नियन्त्रण रेखाको पालना गर्न चीन ग्लोबल रहेको र आफूहरुको पक्षबाट त्यस किसिमका कुनै पनि कार्य नभएको चीनको दावी छ।
चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले विदेशमन्त्री वाङ् यीलाई उधृत गर्दै चिनिया पक्ष वास्तविक सीमा नियन्त्रण रेखाको पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको र आफ्नो तर्फबाट त्यसप्रकारका कुनै पनि गतिविधि नभएको जनाएको छ। यस सम्बन्धमा चीनले पनि भारतसँग वार्ता भैरहेको स्पष्ट पारेको छ।
यस अगाडी दुई देशमा सेना जून १५ मा लद्दाखकै गलवान उपत्यकामा दुई देश सेना आमने-सामने भएका थिए। त्यसक्रममा २० भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो। भारत र चीनबीच ३५ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। लद्दाख सहितका क्षेत्रमा दुई देश बीच सीमा विवाद छन्। सीमाबारे भारत र चीनले तीन दशकमा पटक-पटक वार्ता गरे पनि कुनै समाधान फेला पारेका छैनन्।